Microsoft Exam ဖြေချင်လို့ — MYSTERY ZILLION
Microsoft Exam ဖြေချင်လို့
Microsoft Exam ဖြေချင်လို့ပါ .. MCPD or MCTS ပေါ့ .. ဘာတွေလိုမလဲခင်ဗျ
ဖြေမယ်ဆိုရင် JUNE 30 နောက်ဆုံးထားဖြေဗျ ... discount ရှိလို့ 50 US$ ကို 25 US$ ထိချပေးတယ်ပြောတယ် ...MCTS ဆိုရင်တော့ Microsoft ၄ ဘာသာဖြေမှရမယ်ဗျ ... ဖြေမယ့်ဖြေတော့ ၇ ဘာသာ MCSE ထိသာချဗျာ .. အားပေးတယ် .. ကျွန်တော်လဲ ဒုတိယဘာသာဖြေဖို့လုပ်နေတယ် ...:)
အဲဒီ Exam တွေက တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်လောက် မှန်မှန် လေ့ကျင့်သွားရင် အများဆုံးတစ်ပတ်လောက်ဆို တစ်ဘာသာဖြေလို့ရပါတယ် ...
ဒါပေမယ့် တစ်ကယ်လက်တွေ့ရအောင်လို့ ပြန်လေ့ကျင့်သင့်ပါတယ် ..
ကို ToSeWa က ဘာတွေလိုချင်လည်း ကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက်ကူညီပေးပါ့မယ် ...
ဖြေမယ့်ဘာသာတွေသာပြောပါ ... ကျွန်တော် Ebook တို့ မေးခွန်းလေ့ကျင့်တဲ့ software တွေကို support လုပ်ပေးပါ့မယ် ..
ကျွန်တော့်မှာ MCSE တို့ MCTS နဲ့ တစ်ခြား Microsoft Certification တွေဖြေချင်တဲ့ သူ့တွေအတွက် resources တွေကို ေ၀မျှပေးပါ့မယ် ... :6::6::6:
တစ်ချို့ Exam တွေအတွက် Video Training တွေပါ ကျွန်တော်ဒေါင်းထားတာတွေ တော်တော်များများရှိပါတယ် ..
exams can pass easily. goto http://www.examcollection.com/ and downloads exams vce files and then practice for whole two or three days then u pass
but if u don't know anything technical then u can't pass job interviews. what is important for u getting job or getting pass? ask yourself. I met lots guys and girls who passedalot of exams and some of them knows nothing about programming nor System nor network. But they are proud of they passed exams and they get certificate. that's so wrong because u can cheat in exams but u can't cheat in interviews or in real life jobs.
DAR POP BYA...
Ko EXITER pyaw ta lo PRETICAL lae joot nay ya mal...
certificate ya yon so vista go2yet (alas!!!) ne` ya tal kyar phuu tal bya
:D:D he`he` pyaw tar pyaw dar anaw lae ma joot par woo:P
simon99 wrote: »
အကိုရေ .. ဒီ forum က myanglish ရေးခြင်းကိုခွင့်မပြုပါဘူးဗျာ .. မြန်မာသီးသန့် သို့မဟုတ် english သီးသန့်ပဲသုံးပေးပါခင်ဗျာ ... ဆက်လက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ.. :67:
Exiter ရေ .. 70-528, 70-547 , 70-536 တို့အတွက် Video Training တွေရှိရင် Share ပေးပါခင်ဗျာ ..အဆင်ပြေရင်ပေါ့ ..
ကျွန်တော်သိတာ. .MCTS ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် .. 70-536 and 70-528 or 70-536 and 70-526 or 70-536 and 70-529 နဲ့ .. SQL ပိုင်းဆိုရင် . 431 လိုမျိုး 1 ဘာသာတည်းနဲ့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.. ၄ ဘာသာမလိုဘူးနဲ့တူတယ် ..၄ဘာသာက Network ပိုင်းမှာဆိုရင် MCSA ဖြစ်သွားမယ်ထင်တယ် ..
May 2009 edited May 2009 Moderators